Taliska AMISOM oo la yimid qorsho cusub ee looga hor-tagaayo dhagarta Al-shabaab (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Taliska AMISOM oo la yimid qorsho cusub ee looga hor-tagaayo dhagarta Al-shabaab (SAWIRO)
Taliyaha cusub ee ciidanka AMISOM Jeneraal Cusmaan Nuur Subagle ayaa sheegay in loo baahan yahay in Al-shabaab lagula dagaalamo deeganadda ay iska soo abaabulaan oo ay gacanta ku haayaan, lana go’doomiyo si shacabka looga bad-baadiyo dhagartooda.
Jeneraal Cusmaan Subagle oo ka hadlay xaflad cash sharaf ah oo loo sameeyay soo dhaweyntiisa ayaa sheegay in la qaado talaabooyin muuqda oo lagula dagaalami karo Al-shabaab islamarkaana la bur-buriyo goobaha ay ku dhuumaaleysanayaan.
“Waxaa waajib ah inaan qaadno talaabooyin aan kula dagaalamayno Al-shabaab, islamarkaana aan ku burburinayno goobaha ay iska soo abaabulaan qaraxyadda, waa inaan ka go’doominaa dadka intiisa kale, si aan awood ugu siino dadka shacabka ah, si ay u helaan fursan ay ku dhistaan dalkooda” Sidaas waxaa yiri Jeneraal Cusmaan Subagle.
Sidoo kale, Jeneraal Subagle ayaa sheegay inay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ka caawin doonaan xureynta dhulka ku harsan gacanta Al-shabaab, oo ah goobaha ay inta badan qaraxyadda kasoo abaabulaan.
Xafladaas soo dhaweynta loogu sameeyay Jeneraal Subagle ayaa kasoo qeyb-galay wasiirka amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya C/risaaq Cumar Axmed, taliyeyaasha ciidamada militeriga, booliska, nabad-sugidda Soomaaliya iyo sidoo kale wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Madeira.
Wasiirka Amniga oo isna goobtaasi ka hadlay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in ciidamada AMISOM loo magacaabo taliye Subagle oo uu ku tilmaamay nin is-bedel keeni kara, maadaama uu yahay nin fahmi kara dhaqanka iyo caadooyinka Soomaalida, isla markaana ku hadla afka Soomaaliga.
Ugu dambeyntii, taliyaha ciidamada Soomaaliyeed Jeneraal Maxamed Aadan Axmed oo isna goobtaasi ka hadlay ayaa ballan ku qaaday in ciidamada Soomaaliyeed ay si buuxda ula shaqeeyn doonaan taliska iyo ciidamada AMISOM ee ku sugan dalka Soomaaliya.